Ntuli aka ?! Naanị gbanyụọ ya, Trollongren enwetala uto ahụ
Ochichi (vd Koning): Ntughari ntuli aka n'ihi coronavirus apughi ichi
Ollongren kwuru, "ịtụ vootu bụ 'ihe e chekwara n'echiche'." hahahaha
Site n'ụzọ, gụọ akụkọ oflọikpe nke nyocha nke ụlọ obibi na-enweghị ikuku, ihe Trollongren mere banyere ya. Ọ nwere ike na-efu ihe… ego ụtụ isi Madurodam na-akwalite site na ya
N’ụdị dị ugbu a, Mmemme Onwunweghi Agụike na-enyeghị aka zuru oke maka ebumnuche nke Mịnịsta nke ime obodo na Mmekọrịta Alaeze (BZK) iji mee ka ndị agbata obi ghara inweta ikuku. Onye Mịnịsta nke ime obodo na Mmekọrịta Alaeze ewulitewo atụmanya na-agaghị ezute.
gwa m .. ọ na - aga n'ihu. Gbanyụọ gas ahụ, nke ahụ ọ́ bụghị gas na-achị ọchị?
Minista Ollongren na-enyocha igbe votu na ọkara mita
Ọrịa COVID-19 bụ ugbu a abụghị ihe kpatara enweghị ike ịhazi ma ọ bụ tigharịa ntuli aka ndị omeiwu 2021, mana ọ nwere ike ime ka igbe vootu dị iche. Minista Kajsa Ollongren nke ime obodo dere n'akwụkwọ ozi nye ndị omeiwu na Fraịde na ya na-enyocha nke a. Nke a abụghị naanị maka ntuli aka ndị ụlọ omebe iwu, kamakwa maka ntuli aka nke kansụl nke agwaetiti St. Eustatius na ụfọdụ igbe ntuli aka nke ime obodo ga-eme na ọkara nke abụọ nke 2020.
Ministri nke ime obodo na-aga imepụta ọnọdụ maka nhoputa ndi ochichi kwesiri ịdị ka ya ma ọ bụrụ na a ga-agbanwe igbe ọkpọ. Dịka ọmụmaatụ, nke a nwere ike bụrụ ịmegharị ụlọ ọrụ ntuli aka. Minista Ollongren kwukwara na enwere ike ịme ntuli aka site na akwụkwọ ozi ma ọ bụrụ na enweghị ụzọ ọzọ. Site na nke a, ọ gbakwụnyere na enweghị ike ichebe nzuzo na nnwere onwe ịtụ vootu yana ịme ntuli aka nkịtị na ọnọdụ.
ff maka idoanya
Kedu onye bịanyere aka na iwu na Iwu Royal?
Ndị omebe iwu na Iwu Ndị eze nabatara ga-anabata akwụkwọ (nkwekọrịta) site na Eze ma onye ọrụ gọọmentị ma ọ bụ ode akwụkwọ nke gọọmentị. Ha na-arụ ọrụ. Ihe ịrịba ama a gosipụtara na-egosi na ọ bụghị Eze kama onye ozi na-ahụ maka (ndọrọ ndọrọ ọchịchị)
Willy tog emeela ọzọ…
Kpamkpam, na ha ji akọ tinye nke ọma na usoro iwu, otu ụmụ nwoke dụrụ ha ọdụ.
Ha choro ibe ha ma rụọ ọrụ, ma a gwaghị ndị nkịtị otu a. ha na ibe ha nwere nmekorita siri ike.
Ebe otu onye no, nke ozo di. Odikwa nma dika eze adighi akwughi ugwo, ekele na ike, ma oru gi ketara eketa. Ọ baghị uru itinye ya n'ọrụ ka ndị chọrọ ịga n'ihu ghara iguzosi ike. Mgbe ahụ a gbara gị ume ikpebi nhọpụta nke ndị ahọpụtara ndị a họpụtara n'ezie bụ ndị nnọchianya ya, bụ ọrụ maka ya. onye na - achị eze n'ọnọdụ dị otú a? Ọ bụ ya mere enwere ọtụtụ ndị na-agba mmanụ agba mmanụ. Ọ ga-akwụ ụgwọ ịbụ onye nkuzi oroma. Oroma jibu otu ndoro-ndoro ochichi nke ha jiriwo nzuzu kpochapu ya ka eze wee ghara iru ele mmadụ anya n’ihu. Ma ọ bụ ?? . Usoro Feudal na narị afọ nke 21. Wepu ya. Debanye arịrịọ ugbu a!
N'ezie, nke a ga - abụ ụzọ dị mfe iji mee ihe - ọ bụrụhaala na - achọta ndị na - akwado ya zuru ezu. Echere m na ọ na-ewe ihe karịrị akọwapụtara ebumnuche nke arịrịọ.
Nke bu eziokwu bu na nke a dabakwara n’ihe n’ile anya mkpebi. N'ọnọdụ ọ bụla, ochichi onye kwuo uche ya na-emegbu ndị niile na-enweghị "ụzọ" ha. Na mgbakwunye, usoro ochichi onye kwuo uche ya dịkwa ize ndụ ma ọ bụrụ na mgbasa ozi anọpụghị iche. Na nke ikpeazụ a abụghị ikpe ahụ na Netherlands.
A ga-ahụ ihe atụ nke otu ihe ga-esi mehie n'usoro usoro oge "The Orville" nke 1. Naanị n'ihi na ọ bụ usoro "isi iyi" apụtaghị na ọ nweghị ike ịnwe ozi bara uru…
Mụ onwe m, na-enwe obi abụọ na igwe igwe eletrik ga-arụkọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụrụ na enwetara votu zuru ezu, mana ọ dị mma. Agbabeghị ihe ọjọọ. N'agbanyeghị nke a, ọ bụ ihe ịtụnanya itinye arịrịọ. Ọ bụ mmetụta ahụ ị ghọtara na ndị mmadụ nwere ike n'ebe ị nọ na enweghị ike ịme ihe ọ bụla na-enweghị ha. Ọ bụrụ n’ị kwenyere nke ahụ, gịnị kpatara ndị mmadụ ga-aza arịrịọ gị… ..
Arịrịọ a abụghị naanị nyocha nke ole mmadụ dị njikere ịmalite ma gosipụta onwe ha. Ọ bụ n'ezie ebupute neiamdn site n'ọchịchị nke ugbu a, mana iji ịdebanye aha zuru ezu ọ bụ akara nke: "Ugbu a anyị na-ahapụ" kwupụta usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ugbu a.
Ihe izizi ime, n’ezie, bụ nyocha siri ike nke ihe dị na tube. Nke ahụ bụ aghụghọ n'ihi na ị na-ewepụ ndị mmadụ riri ahụ n'otu oge, mana ọ bụ ugbu a ma ọ bụ na ọ bụ mgbe ahụ anyị ga-ahụ mmadụ ole dị njikere n'ezie ịga na ala maka mgbanwe.
You nwere ike igbochi ya ime ihe ọjọọ. Ihe atụ: ịgba ọgwụ mgbochi mgbochi. Ka e were ya na ọtụtụ chọrọ ọgwụ mgbochi ịgba ọgwụ mgbochi n'ihi na mgbasa ozi emetụtawo ha ma nweekwa nkwenye na ọ dị mma. Iwu a megidere iwu. Iwu a nwere ụfọdụ iwu dị mkpa dabere na nnwere onwe na ikike mmadụ iji aka ya kpebie ihe ọ ga-eme. Ikwesiri igbanyeghị iwu (nke na-eme ya na iwu dị ugbu a) ịnyefe iwu na emebi ma ọ bụ nwaa ịgbaghari usoro iwu (dabere na ikike mmadụ bụ isi).
Maka ndị na-agụ ihe ma chọọ n'ezie mgbanwe maka ụmụ anyị na ụmụ ha. Eleghị anya ị debara arịrịọ ahụ, mana nke ahụ apụtaghị na ọ bụ mgbanwe ahụ. You dị njikere ime ihe ọ bụghị ịkekọrịta isiokwu na vidiyo ndị ọzọ ma ọ bụ obere karịa nkwenye nke ihe amaralarị. Ọ ga - ekwe omume ịnye "mmeghari" ụfọdụ ọzọ site na, dịka ọmụmaatụ, ịtọlite ​​nkata vidiyo nke enwere ike ikwurịta ihe ozugbo yana ebe, dịka ọmụmaatụ, anyị na-ekekọrịta ọrụ iji mee ihe ndị na - akpata ezigbo mgbanwe. Ma ọ bụ enwere ntụnye ndị ọzọ maka ị nweta otu ndị agha buru ibu. Enwere ọtụtụ ndị nwere obi ike (gụnyere Martin) nke egosipụtara na vidiyo ndị nwere ikike ịkpọ aha. Oge eruola ka anyị yie ndị ahụ inyoghi inyoghi ma weghara oke. Kwesịrị inweta nkwado na nke ahụ chọrọ ịhapụ àgwà n'echiche. Ya mere ana m atụ aro ime nkata vidiyo, mana ajụjụ z2:
* ndị dị njikere isonye
* enwere aro ndị ọzọ
anyị ga-agụ ihe mmeghachi omume bụ
Enwere m olileanya n'ezie na ndị mmadụ ga-ebute ụzọ. Mkparịta ụka vidiyo nwere ike ịbụ ihe na-enweghị isi, n'ihi na ị ga-anọrịrị n'ịntanetị n'otu oge, mana ị nwere ike ịmepụta mmegharị site na ịkwụ ọtọ na ịme nkwupụta doro anya. Nwere ike n’eme vidiyo ma zipu ya n’ebe a. Mgbe nke a mere, anyị anaghị echigharịkwuru ndị agha mgbasa ozi nke steeti (nke a na-akpọ 'troll agha'). Weta echiche na ịrụ ọrụ tara akpụ.
Mbido dị mkpa ga-abụ ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ebido ịkekọrịta weebụsaịtị wee gbaa mbọ kwenye ndị ọzọ.
Odi oke, anyi abughi ndi iro nke ndi mmadu dika esi akowa ya n'okpuru ochichi Stalin.
Anyị “bụ” ndị ahụ. Ya mere, anyị ekwesịghị ịbanye na gulag ma ghara ịtụ egwu ya, anyị nọnyeere ndị mmadụ maka ndị mmadụ
Ọzọ nụchara anụcha bụ na ị bụ nwoke-kpọrọ asị ma ọ bụrụ na ịchọghị iyi nkpuchi, ọzọ n'okpuru aghụghọ nke ndị iro nke ndị mmadụ, ha echeela banyere ya mgbe ahụ n'okpuru Stalin na ugbu a na ọkwa ụwa. Olile anya ndi mmadu n’abia atule. Ga - enweta ha megide ha, yabụ buru ụzọ bulie mmata, ihe ngosi nke mgbasa ozi wdg, ị nwere votu m
Onye na-eme ka ndị mmadụ mara abụghị onye iro nke ndị mmadụ, kama ọ bụ "enyi ndị mmadụ", ọ bụghị dịka Gulag siri dị.
Offọdụ n’ime ndị na - agụ akwụkwọ na - atụ aro maka iru ndị na - ege ntị buru ibu ma ọ bụ ihe atụ nke omume enwere ike ịmeghachi ya iji mee ka ndị na - ege gị ntị buru ibu. Ọzọ, ịkekọrịta nchoputa na ịntanetị adịghị eso na inweta ebumnuche nke ọchịchị onye kwuo uche ya. Dịka ọmụmaatụ, m na-ekwu banyere saịtị ndị m na-aga mgbe niile http://www.fvvd.nl Enwere ndị ọzọ na-eme nke a? Enwere ndị na-agụ akwụkwọ na-etinye aka na mmemme na mpụga Internetntanetị iji kwalite mmata nke echiche nke onye kwuo uche ya na saịtị ahụ metụtara. Ọ bụrụ otu a, kekọrịta ya na ndị ọzọ nwere ike weghara. Ahụrụ m na ọnụọgụ ndị bịanyere aka na ya bụ 1181 (ekele tupu emee ihe a) na nke ga-agharịrịrị ọtụtụ oge. Dịka m dere na mbụ, ugbu a bụ oge n'ihi na nrụpụta ndị ọgbọ na-agbada. Ndi mmadu nwere obi uto ma na-acho uzo ozo. Onwere onye n’icheta eriri aka Lance Armstrong? Zoiest jidekwara ọtụtụ oge karịa ka anyị cheburu na mbụ. Wouldtọ ga-atụkwa aro, mana m ji n’aka na n’etiti mmadụ 1100 ndị bịanyere aka n’akwụkwọ, n’ezie echiche ndị ka mma. Mee ka ndị ọzọ nụ ya.
Ma ihe mere al-Qadhafi? Nwuputa ego nke gi na nke ozo agaru iru bu ndi nwere uche, ime ka ndi mmadu kwenye na inye ha ala siri ike site na ikwuwa na ulo ha bi bu ihe ha. bụrụ ma ọ bụ dị ma kwuwapụta na ha akwụghị ụgwọ. Enwere m FB ma ekwesịrị inwe ọzọ, ịga nke ọma na ụlọ ọrụ ahụ.
Nleta ha: 2.442.618